I-ketoacidosis ne-ketoacidotic coma > Ukwelashwa nokuvimbela
Izinkinga ezinkulu zesifo sikashukela lapho kwenziwa udokotela
ISENZO, I-EOLOOLOGY NE-PATHOGENESIS
Ukwehla kwamandla omzimba kwe-carbohydrate, amafutha, i-protein metabolism, kanye nokulinganisa okungama-electrolyte kanye ne-acid-base esele, nge-hyperglycemia, hyperketonemia, ketonuria kanye ne-metabolic acidosis ngenxa yokushoda kwe-insulin okungazelelwe futhi okubalulekile. Isici esibonakalayo ukuba khona kwezidumbu ze-ketone ku-seramu yegazi nomchamo. Ingenzeka ngesikhathi sohlobo ngalunye lwesifo sikashukela, ikakhulukazi ukubonakaliswa kokuqala kwesifo sikashukela sohlobo 1. Ngenxa yokushoda kwe-insulin, kukhona ukwakheka ngokweqile kwe-glucose esibindini ngenxa ye-gluconeogeneis, kanye nokwanda kwe-lipolysis ngokwakhiwa kwemizimba ye-ketone. Umphumela walokhu yilezi: i-hyperglycemia, ukulahleka kwe-glucose emchameni, i-osmotic diuresis, ukuphuma komzimba, ukuphazamiseka kwe-electrolyte (ikakhulukazi i-hyperkalemia enokuntuleka kwe-potrasium potracularular kanye ne-metabolic acidosis. Izinto ezibangela ukuqedwa kwesifo se-insulin (isb. Ngenxa yesifo sepheshana lesisu, isiguli siyakugwema ukudla) noma ukusetshenziswa okungafanele kwe-insulin, izifo (amagciwane, amagciwane, isikhunta), izifo ezithinta inhliziyo nezinkinga zenhliziyo (ukubanjwa ngamandla kwemizwa, isifo sohlangothi), ukubambezeleka kokuxilongwa kweshukela Uhlobo 1 sikashukela, i-pancreatitis, ukusebenzisa kabi utshwala, ukukhulelwa, zonke izimo ezidala ukwanda okungazelelwe kwesidingo se-insulin. phezulu
1. Izimpawu ezisetshenziswayo: Ukomela ngokweqile, umlomo owomile, i-polyuria, ubuthakathaka, ukukhathala kanye nokuqina, ukungazi kahle komzimba kuze kufike ekhefini, isiyezi kanye nekhanda, isicanucanu nokuhlanza, Ubuhlungu besisu, Ubuhlungu besifuba. phezulu
2. Izimpawu zokuhlwaya: i-hypotension, i-tachycardia, ishesha futhi ijulile, bese kuba ukuphefumula okujulile, izinkomba zokuphelelwa ngamandla (ukuncipha kwesisindo, ukuncipha kwesikhumba), ukuncipha kokunciphisa umzimba, iphunga le-acetone ephuma emlonyeni, ubomvu bobuso, ukuncipha kwe-eyeball turgor, ukungezwani kodonga lwesisu (njengoba ne-peritonitis)
Ukuxilongwa kwasungulwa ngemiphumela yokuhlolwa kwelebhu → itafula. 13.3-1. Ezigulini eziphathwa nge-SGLT-2 inhibitor, i-glycemia ingaba ngaphansi.
I-Diabetesic Ketoacidotic Coma (DKA)
I-DKA iyinkinga enkulu yesifo sikashukela i-mellitus, ebonakala yi-metabolic acidosis (pH ngaphansi kuka-7.35 noma i-bicarbonate okuhlushwa ngaphansi kuka-15 mmol / L), ukwanda komehluko we-anionic, i-hyperglycemia ngaphezulu kwe-14 mmol / L, ketonemia. Imvamisa iba nesifo sikashukela sohlobo 1. Ama-akhawunti we-DKA abopha amacala angama-5 kuye kwangama-20 ezigulini eziyi-1000 ngonyaka (2/100). Ukufa kuleli cala kungu-5-15%, ezigulini ezingaphezulu kweminyaka engu-60 - 20%. Zingaphezu kwe-16% iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1 ezifa ukhubazekile lwe-ketoacidotic. Isizathu sokuthuthukiswa kwe-DKA ukusilela ngokuphelele noma okukhulunyiwe kwe-insulin ngenxa yokungalingani kwe-insulin noma isidingo esengeziwe se-insulin.
Izici ezinikezayo: umthamo onganele we-insulin noma weqa umjovo we-insulin (noma uthatha amaphilisi ama-hypoglycemic agents), ukuhoxa okungagunyaziwe kwezokwelapha kwe-hypoglycemic, ukwephulwa kwendlela yokulawulwa kwe-insulin, ukungezelelwa kwezinye izifo (ukutheleleka, ukuhlukumezeka, ukuhlinzwa, ukukhulelwa, ukufakwa kwe-myocardial, isifo sohlangothi, ukucindezela, njll.) , izinkinga zokudla (ama-carbohydrate amaningi), ukusebenza ngokomzimba nge-glycemia ephezulu, ukusetshenziswa kabi kotshwala, ukuzithiba okwanele kwe-metabolism, ukuthatha imishanguzo ethile izidakamizwa nnyh (corticosteroids, calcitonin, saluretics, acetazolamide, β-blocker, diltiazem, i-isoniazid, phenytoin et al.).
Imvamisa, i-etiology ye-DKA ihlala ingaziwa. Kumele kukhunjulwe ukuthi cishe emaphesenti angama-25 amacala, i-DKA yenzeka ezigulini ezinesifo sikashukela esisanda kutholakala.
Kunezigaba ezintathu zesifo sikashukela sikashukela: i-ketoacidosis elinganiselayo, i-precoma, noma i-ketoacidosis ebolile, ikoma.
Izinkinga zesifo sokukhathazeka kwe-ketoacidotic zifaka phakathi i-vein thrombosis ejulile, i-pulmonary embolism, i-arterial thrombosis (i-myocardial infarction, i-infraction ye-cerebral, i-necrosis), i-pneumonia, i-cerebral edema, i-edema ye-pulmonary, ukutheleleka, i-GLC kanye ne-ischemic colitis, i-grositis ye-erosive. Ukwehluleka okukhulu kokuphefumula, i-oliguria kanye nokwehluleka kwezinso kuyaphawulwa. Izinkinga zokwelashwa yi-edema yamakhaza kanye ne-pulmonary edema, hypoglycemia, hypokalemia, hyponatremia, hypophosphatemia.
Izindlela zokuxilonga ze-DKA
Isici se-DKA yintuthuko ethuthukayo, imvamisa ngaphezulu kwezinsuku ezimbalwa.
Izimpawu ze-ketoacidosis (iphunga le-acetone ekuphefumuleni okuphefumula, ukuphefumula kweKussmaul, isicanucanu, ukuhlanza, i-anorexia, ubuhlungu besisu).
Ukuba khona kwezimpawu zokuphelelwa ngamandla (ukuncipha kwezicubu zomzimba, ithoni yeso, ithoni yemisipha, i-tendon ekhombisa, izinga lokushisa lomzimba kanye nomfutho wegazi).
Lapho kutholwa i-DKA esigabeni sokuqala, kubalulekile ukuthola ukuthi isiguli sinesifo sikashukela, ukuthi ngabe kunomlando we-DKA, ukuthi isiguli sithola ukwelashwa kwe-hypoglycemic, futhi uma kunjalo, bekuyini isikhathi sakho sokugcina umuthi, isikhathi sokudla kokugcina, noma umsebenzi owenziwe ngokweqile womzimba waphawulwa noma ukuphuza utshwala, okuthe izifo ezandulelayo zandulelayo, kwakuyipoluria, i-polydipsia nobuthakathaka.
Ukwelapha kwe-DKA esigabeni se-prehospital (bheka Ithebula 1) kudinga ukunakwa okukhethekile ukugwema amaphutha.
Amaphutha angaba khona ekwelashweni nasekuxilongeni esigabeni se-prehospital
Ukwelashwa kwe-insulin kwangaphambi kwesibhedlela ngaphandle kokulawulwa kwe-glycemic.
Ukugcizelela ekwelashweni kungokwelashwa okuqinile kwe-insulin lapho kungekho ukuvuselelwa komzimba okusebenzayo.
Ukudla okunganele koketshezi.
Ukwethulwa kwezixazululo ze-hypotonic, ikakhulukazi ekuqaleni kokwelashwa.
Ukusetshenziswa kwe-diuresis ephoqelelwe esikhundleni sokuphindisela emzimbeni. Ukusetshenziswa kokugaywa komzimba kanye nokungenisa uketshezi kuzomane kunciphise ukubuyiselwa kwemali esele, futhi nge-hyperosmolar coma, ukuqokwa kwama-diuretics kuphikisana ngokuphelele.
Ukuqala ukwelashwa nge-sodium bicarbonate kungabulala. Kuyafakazelwa ukuthi ukwelashwa kwe-insulin okwanele ezimeni eziningi kusiza ukuqeda i-acidosis. Ukulungiswa kwe-acidosis nge-sodium bicarbonate kuhlotshaniswa nengozi enkulu yezinkinga. Ukwethulwa kwe-alkalis kuthuthukisa i-hypokalemia, kuphazamisa ukuhlukaniswa kwe-oxyhemoglobin, i-carbon dioxide eyenziwe ngesikhathi sokuphathwa kwe-sodium bicarbonate, kuthuthukisa i-intracellular acidosis (yize i-pH yegazi ingakhuphuka kuleli cala), i-paradoxical acidosis iphinde ibonwe ku-cerebrospinal fluid, okungaba nomthelela ku-edema ye-cerebral rebound alkalosis. Ukulawulwa okusheshayo kwe-sodium bicarbonate (jet) kungadala ukufa ngenxa yentuthuko yesikhashana ye-hypokalemia.
Ukwethulwa kwesisombululo se-sodium bicarbonate ngaphandle kokuthola i-potassium eyengeziwe.
Ukuhoxiswa noma ukungalawulwa kwe-insulin ezigulini ezine-DKA ezigulini ezingakwazi ukudla.
Ukuphathwa kwe-intravenous jet kwe-insulin. Imizuzu yokuqala engu-15-20 kuphela, ukugxila kwayo egazini kugcinwa ezingeni elanele, ngakho-ke le ndlela yokuphatha ayisebenzi.
Kathathu kuye kane ukuphathwa kwe-insulin (ICD) esebenza ngokungagcwele. I-ICD isebenza amahora angama-4-5, ikakhulukazi ezimweni ze-ketoacidosis, ngakho-ke kufanele ichazwe okungenani amahlandla ayisihlanu kuya kwayisithupha ngosuku ngaphandle kwekhefu lasebusuku.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ze-sympathotonic ukulwa nokuwa, okuthi, okokuqala, kungama-hormone we-contrainsulin, futhi, okwesibili, ezigulini ezinesifo sikashukela, umthelela wazo ovuselelayo ekugodleni kwe-glucagon unamandla kakhulu kunabantu abanempilo.
Ukuxilongwa okungalungile kwe-DKA. Ku-DKA, okubizwa nge- "diabetesic pseudoperitonitis" kuvame ukutholakala, okufanekisa izimpawu "zesisu esibuhlungu" - ukungezwani kanye nokuqina kodonga lwesisu, ukuncipha noma ukunyamalala kokububula okungapheli, kwesinye isikhathi ukukhuphuka kwe-serum amylase. Ukutholwa kanyekanye kwe-leukocytosis kungaholela ekutheni kube nephutha ekuxilongeni, ngenxa yalokho isiguli singena emnyangweni wokutheleleka ("ukutheleleka kwamathumbu") noma umnyango wokuhlinzwa ("wesisu esibuhlungu"). Kuzo zonke izimo "zesisu esibuhlungu" noma izimpawu ze-dyspeptic esigulini esinesifo sikashukela i-mellitus, kudingeka ukuzimisela kwe-glycemia ne-ketotonuria.
Isilinganiso esingakhishwa se-glycemia kunoma yisiphi isiguli esesimweni esingazi lutho, esivame ukufaka ukwakheka kokuxilongwa okungelona iqiniso - "i-cerebrovascular ngengozi", "ukukhohlisa kwe-etiology engacacile", ngenkathi isiguli sinokubuyiselwa okunamandla kwesifo sikashukela.
I-Hyperosmolar non-ketoacidotic coma
I-hyperosmolar non-ketoacidotic coma ibonakala ngokuphelelwa ngamandla, i-hyperglycemia ebalulekile (imvamisa ingaphezulu kwama-33 mmol / L), i-hyperosmolarity (ngaphezu kwe-340 mOsm / L), i-hypernatremia ngaphezulu kwe-150 mmol / L, kanye nokungabikho kwe-ketoacidosis (i-maximum ketonuria (+)). Ngokuvamile kukhula ezigulini esezikhulile ezinesifo sikashukela sohlobo 2. Ivamile izikhathi eziyishumi kune-DKA. Kubonakala ngesilinganiso sokushona okuphezulu (15-60%). Izizathu zokwakhiwa komqondo we-hyperosmolar coma ukuntuleka kwe-insulin kanye nezici ezivusa ukuvela komzimba.
Izici ezinikezayo: i-insulin enganele noma weqa umjovo we-insulin (noma ukuthatha amaphilisi ama-hypoglycemic agents), ukuhoxa okungagunyaziwe kwe-hypoglycemic therapy, ukwephulwa kwendlela yokusebenzisa i-insulin, ukungezelelwa kwezinye izifo (ukutheleleka, i-pancreatitis eshubile, ukuhlukumezeka, ukuhlinzwa, ukukhulelwa, ukumelana ngamandla kwe-myo Cardial njll.), izinkinga zokudla (ama-carbohydrate amaningi), ukuthatha imishanguzo ethile (ama-diuretics, ama-corticosteroids, ama-beta-blockers, njll.), ukupholisa, ukungakwazi ukuqeda ukoma ukushiswa, ukugabha noma isifo sohudo, i-hemodialysis noma i-peritoneal dialysis.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi ingxenye yesithathu yeziguli ezine-hyperosmolar coma ayinakuthola ukuxilongwa kwesifo sikashukela kwangaphambili.
Ukomelela okuqinile, i-polyuria, ukomisa kakhulu, i-arterial hypotension, i-tachycardia, ukubanjwa okugxile noma okujwayelekile okukhula izinsuku ezimbalwa noma amasonto. Uma nge-DKA, ukuphazamiseka kwesistimu yezinzwa ephakathi kanye nohlelo lwezinzwa oluqhubekayo kufinyelela kancane kancane njengokuqothuka komqondo nokwenqatshelwa kwe-tendon reflexes, lapho-ke i-hyperosmolar coma ihambisana nokuphazamiseka kwengqondo okuphathelene nobuchopho kanye ne-neurological. Ngaphezu kwesoporotic state, nayo evame ukubonwa nge-hyperosmolar coma, ukuphazamiseka kwengqondo kuvame ukuqhubeka njenge-delirium, i-acute hallucinatory psychosis, kanye ne-catotonic syndrome. Ukuphazamiseka kwe-Neurological kuboniswa yizimpawu ezigxile ze-neurological (aphasia, hemiparesis, tetraparesis, ukuphazamiseka kwemizwa kwepholorphic, i-pathological tendon reflexes, njll.).
I-Hypoglycemic coma iba ngenxa yokuncipha okubukhali kwe-glucose yegazi (ngaphansi kuka-3-3.5 mmol / l) kanye nokusilela kwamandla okuchaziwe ebuchosheni.
Izici ezinikezayo: i-overdose ye-insulin ne-TSS, ukweqa noma ukudla okwanele, ukudla okwandayo komzimba, ukuphuza ngokweqile utshwala, ukuthatha imishanguzo (β-blockers, salicylates, sulfonamides, njll).
Kungenzeka kube namaphutha okuxilonga nokwelashwa
Umzamo wokwethula imikhiqizo equkethe i-carbohydrate (ushukela, njll.) Emgodini womlomo wesiguli esingazi lutho. Lokhu kuvame ukuholela esifisweni nasenjuseni.
Isicelo sokumisa i-hypoglycemia yemikhiqizo engafanele lokhu (isinkwa, ushokoledi, njll.). Le mikhiqizo ayinawo umphumela owanele wokukhulisa ushukela noma yenyusa amazinga kashukela wegazi, kepha kancane kakhulu.
Ukuxilongwa okungalungile kwe-hypoglycemia. Ezinye izinkomba ze-hypoglycemia zingabhekwa njengephutha njengokuthathwa kwesifo sokuwa, isifo sohlangothi, "inhlekelele yemvelo", njll. Esigulini esithola ukwelashwa kwe-hypoglycemic, ngokusola okuvumayo kwe-hypoglycemia, kufanele kumiswe ngokushesha, noma ngaphambi kokuthola impendulo yaselebhu.
Ngemuva kokususa isiguli esimweni se-hypoglycemia enobunzima, ubungozi bokuphindelela buvame ukungabhekwa.
Ezigulini ezithwele imvelaphi engaziwa, kuyadingeka njalo ukucabanga ukuba khona kwe-glycemia. Uma kwaziwa ukuthi isiguli sinesifo sikashukela ngasikhathi sinye futhi kunzima ukwahlukanisa uhlobo lwe-hypo- noma i-hyperglycemic ye-coma, ukuphathwa kwe-glucose kwe-intravenous ku-umthamo we-20- 40-60 ml wesisombululo se-40% kunconyelwa ukuxilongwa okuhlukile nokunakekelwa okuphuthumayo kwe-hypoglycemic. coma. Endabeni ye-hypoglycemia, lokhu kunciphisa kakhulu ubukhulu bezimpawu futhi, ngenxa yalokho, kuzovumela ukwahlukanisa lezi zimo ezimbili. Nge-hyperglycemic coma, inani elinjalo le-glucose empeleni ngeke lisithinte isimo sesiguli.
Kuzo zonke izimo lapho isilinganiso se-glucose singenakwenzeka khona manjalo, ushukela ogxile kakhulu kufanele aphathwe ngokunamandla. Uma i-hypoglycemia ingamiswa esimweni esiphuthumayo, ingabulala.
I-Thiamine 100 mg iv, ushukela ongu-40% 60 ml kanye ne-lexone 0,4-22 mg iv ibhekwa njengemithi eyisisekelo yeziguli ezikhubazekile, lapho kungekho khona ithuba lokucacisa ukutholakala kwezifo nokulaliswa esibhedlela ngokuphuthumayo. Ukusebenza nokuphepha kwale nhlanganisela kuqinisekiswe kaningi ekusebenzeni.
U-Kh. M. Torshkhoeva, Ozokhethwa Kwezesayensi Yezempilo
A. L. Vertkin, Udokotela Wezesayensi Yezokwelapha, UProfesa
V.V. Gorodetsky, ukhetho lwezesayensi yezokwelapha, uprofesa ohambisana naye
I-ambulensi ye-NNGO, i -MSMSU